Air Senegal hampitombo ny sambony miaraka amin'ny Airbus A220 valo
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Senegal hampitombo ny sambony miaraka amin'ny Airbus A220 valo
Air Senegal, ilay vaom-pirenena vaovaon'i Senegal, dia nanao sonia Memorandum of Understanding (MoU) ho an'ny valo Airbus Fiaramanidina A220-300.
Nosoniavina androany ny MoU nanatrehan'ny HE Alioune SARR, minisitry ny fizahantany sy ny fitaterana Senegal.
Ny fahombiazan'ny A220s dia ahafahan'ny Air Senegal mampihena ny vidin'ny zotram-pitaterana an'habakabaka sady manome fiononana tsy manam-paharoa mpandeha mandritra ny andiany rehetra. Tany am-piandohan'ny taona 2019, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka afrikanina voalohany nanidina fiaramanidina widebody vaovao an'ny Airbus, ny A330neo, misy motera teknolojia farany, elatra vaovao misy aerodinamika nohatsaraina ary famolavolana elatra miolaka, izay nahitana fanao tsara indrindra avy amin'ny A350 XWB.
Nilaza Andriamatoa CEO Ibrahima Kane Air Senegal fa “handray anjara amin'ny fampandrosoana ny tambajotranay lavitra any Eropa sy ny tambajotranay any Afrika ireo fiaramanidina vaovao 220 ireo. Miaraka amin'ny fiaramanidina A330neo tato ho ato, ity fiaramanidina Airbus vaovao ity dia manambara ny fanirian'i Air Senegal hanome ny traikefa fitetezana tsara indrindra ho an'ireo mpandeha anay. ”
“Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny asan'ny A220 amin'ny kaontinanta afrikanina ary faly izahay manampy ny mpitatitra saina vaovao an'i Senegaly ao amin'ny lisitry ny mpanjifa afrikanina A220. Manolotra ny vidin'ny fandidiana farany ambany indrindra amin'ny sokajy misy azy, ny A220 no fiaramanidina tsara indrindra ho an'ireo zotram-piaramanidina handefasana ny lalam-pirenena sy iraisam-pirenena amin'ny fomba mahomby ”, hoy ny Lehiben'ny tompon'andraikitra Christian Scherer Airbus.
Ny A220 no hany fiaramanidina namboarina ho an'ny tsena seza 100-150; Izy io dia manome fahombiazan'ny solika tsy hay tohaina sy fampiononana mpandeha an-habakabaka amin'ny fiaramanidina tokana. Ny A220 dia manambatra ny aerodynamika manara-penitra, ny fitaovana mandroso ary ny milina turbofan an'ny Patt1500G an'ny Pratt & Whitney ho an'ny milina turbofan miisa 20 isan-jato ambany farafahakeliny raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina taloha, miaraka amin'ny emissions ambany indrindra ary fihenan'ny dian-tabataba. Ny A220 dia manolotra ny fahombiazan'ny fiaramanidina mandeha tokana lehibe kokoa. Tamin'ny faran'ny volana oktobra 2019 dia nahangona kaomandy 220 ny A530.
Nanafika an'i Wynwood i Curaçao nialoha an'i Art Basel
Ny flynas an'i Saudi Arabia dia manafatra fiaramanidina 10 A321XLR amin'ny Dubai Airshow 2019